चितवनमा मानसिक अस्पतालसहितको सुधार केन्द्र – Chitwan Post
चितवनमा मानसिक अस्पतालसहितको सुधार केन्द्र
रत्ननगर । मानसिक रोगी र कुलतमा फसेका युवाहरुलाई पुनर्जीवन दिन चितवनमा अस्पतालसहितको सुधार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
डाक्टरहरुको सामूहिक लगानीमा मानसिक रोगको उपचार, कुलतमा फसेकालाई पुनस्र्थापनासँगै सीपमूलक तालिम दिएर रोजगार बनाउने गरी अस्पतालसहितको सुधार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
पूर्वी चितवनको खैरहनी ११, कठारमा १२ करोडको लगानीमा ब्युटीफुल माइन्ड रिहाविलिटेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यस्तो प्रकारको सेन्टर नेपालमै पहिलोपटक सञ्चालनमा आएको दाबीसमेत गरिएको छ ।
मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. गिरिराज भन्तानासहितका डाक्टरहरुको लगानीमा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । ‘यस्तो प्रकारको संस्था नेपालमै छैन’, डाक्टर भन्तानाले भने, ‘नयाँ सोचका साथ हामीले संस्था सञ्चालनमा ल्याएका हौँ ।
मानसिक रोगले विक्षिप्त भएका बिरामी र कुलतमा फसेकालाई नयाँ जीवन प्रदान गर्न संस्था सञ्चालनमा ल्याएका हौँ ।’ मानसिक रोगीका कारण परिवारले झेल्नु परेको पीडा र कुलतमा फसेका छोराछोरीका कारण अभिभावकले भोग्नु परेको समस्यालाई निराकरण गर्ने उद्देश्यले संस्थाको जन्म भएको उनको भनाइ छ ।
नाफा कमाउनभन्दा पनि सभ्य समाज निर्माण गर्ने योजनाका साथ सेन्टरले काम गरिरहेको डा. भन्तानाले बताए । कुलतले व्यक्तिलाई मात्र होइन समाजलाई नै बिगारिरहेको भन्दै डा. भन्तानाले बिग्रिँदै गएको समाजलाई सही बाटोमा ल्याउन नेपालमै पहिलोपटक सेन्टर स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको दाबी गरे । यस्तो प्रकारको संस्था भारतमा रहे पनि नेपालमा यो पहिलो भएको उनले बताए ।
सो संस्था २०७५ साउन महिनादेखि सुरू भएको हो । अहिले मानसिक रोगी र कुलतमा फसेका गरी ३४ जनाले उपचार गराइरहेका छन् । ४२ जना उपचार गरी घर फर्किसकेको डा. भन्तानाले जानकारी दिए । सेन्टरले उपचार, पुनस्र्थापना र सीपमूलक तालिम गरी ६ महिनाको कोर्ष पूरा गर्दै आएको छ । एक महिना उपचार, २ महिना पुनस्र्थापना, ३ महिना बिरामी र कुलतमा फसेकाहरुको चाहना तथा रूचिका आधारमा तालिम प्रदान गर्ने गरिएको डा. भन्तानाले जानकारी दिए ।
सेन्टरले औषधि उपचारसहित योगासमेत गराउने गरेको छ । कुलतमा फसेका युवाहरुलाई मेडिकल उपचारसहित काउन्सिलिङ गर्ने गरिएको छ । ‘कुलतबाट मुक्त गराउन उपचारभन्दा पनि काउन्सिलिङ सबैभन्दा ठूलो औषधि हो’, डा. भन्तानाले भने, ‘काउन्सिलिङलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ ।’ उनले बिरामीको उमेर समूहका आधारमा मानसिक रोगको कारण पत्ता लगाएर उपचार गर्ने गरिएको बताए ।
सेन्टरबाट उपचार गरी घर फर्केका बिरामीहरु रोग पुनः बल्झिएर सेन्टरमा अहिलेसम्म नआएको उनको भनाइ छ । उपचार गराएर निको भएका मानसिक रोगी र कुलतबाट मुक्त भएका युवाहरुलाई सेन्टरमै रोजगारीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । ‘यहाँ काम गर्नेलाई सेन्टरमै अवसर दिन्छौँ’, उनले भने, ‘बाहिर काम गर्न चाहनेलाई पनि काम लगाइदिने व्यवस्था हामीले नै गरेका छौँ ।’
सेन्टरमा उपचार गर्न आउने मानसिक रोगी बढिरहेका छन् । ६ महिना उपचार र पुनस्र्थापनाका लागि बिरामीले सेन्टरलाई २ लाख रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । सो शुल्क तिरेपछि आवासीय सुविधासहित उपचारको व्यवस्था गरिएको छ ।
बिरामीको उपचार, काउन्सिलिङका लागि विशेषज्ञ डाक्टरहरु सहितको ५० जनाको टोलीले दैनिक काम गर्ने गरेको छ । सेन्टरले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरुका लागि छूटको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा बिरामीलाई ५० प्रतिशतसम्म छूटको व्यवस्था गरिएको डा. भन्तानाले जानकारी दिए । सेन्टर सञ्चालनका लागि १४ कट्ठा जग्गा क्षेत्रफलमा पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । सेन्टरले निकट भविष्यमै मानसिक अस्पताल, पुनस्र्थापना केन्द्र र सीप तथा रोजगार तालिम केन्द्र छुट्टाछुट्टै स्थानबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको डा. भन्तानाले बताए ।
अनियमितता र ढिलासुस्ती असह्य : मेयर दाहाल